Ebɛnadze Nye Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw No? | FAQ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian America Mmum Kasa Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zulu
Ebɛnadze Nye Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw No?
Akwankyerɛ Kuw no yɛ kuw ketseaba bi a no mufo no yɛ Christianfo a hɔnho akokwaa, na hɔn na wɔma Jehovah Adasefo a wɔwɔ wiadze nyina no akwankyerɛ. Hɔn edwuma no wɔ mu ebien:
Wɔhwɛ ma wosiesie nkyerɛkyerɛ a ogyina Bible do dze nam Jehovah Adasefo nwoma ahorow, nhyiamu ahorow, nye skuul ahorow do.​—Luke 12:42.
Wɔhwɛ Jehovah Adasefo wiadze nyina edwuma no do dze nam hɛn asɛnka edwuma no ho akwankyerɛ a wɔdze ma, nye biribiara a nkorɔfo fi hɔn pɛ mu yi dze boa asɛnka edwuma no a wɔhwɛ do no do.
“Asomafo no nye mpanyimfo no” a nna wɔwɔ “Jerusalem” no sisii gyinae ahorow ma ɔdze mfaso brɛɛ Christianfo asafo ahorow a nna wodzi kan no. Akwankyerɛ Kuw no dzi hɔn nhwɛdo yi ekyir. (Ndwuma 15:2) Tse dɛ dɛm mbarimba anokwafo no, Akwankyerɛ Kuw no munyi biara mmbu noho dɛ ɔyɛ hɛn ahyehyɛdze no do ɔkwankyerɛfo anaa ɔkandzifo. Wɔma Bible no kyerɛ hɔn kwan, na wɔgye to mu dɛ Jehovah Nyankopɔn apaw Jesus Christ dɛ ɔno nye asafo no Tsir.​—1 Corinthfo 11:3; Ephesusfo 5:23.
Woananom nye Akwankyerɛ Kuw no mufo?
Obodur January 2018 no, nna Akwankyerɛ Kuw no mufo a wɔwɔ hɔ nye Kenneth Cook, Jr., Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson nye David Splane. Wɔsom wɔ hɛn wiadze nyina edwumayɛbea tsir wɔ Warwick, New York, U.S.A.
Ɔkwan bɛn do na wɔahyehyɛ Akwankyerɛ Kuw no?
Akwankyerɛ Kuw no ahyehyɛ egyinatukuw ahorow esia dɛ wɔnhwɛ hɛn dwumadzi n’afã ahorow do, na Akwankyerɛ Kuw no munyi biara som wɔ dɛm egyinatukuw no mu kor anaa dza ɔbor dɛm mu.
Nkitahodzifo Egyinatukuw: Ɔhwɛ ma aban mbra bɔ hɛn ho ban, ɔhwɛ ma wɔyɛ atoyerɛnkyɛm ber mu mboa ho nhyehyɛɛ, odzi hɛn som no mufo a osian hɛn som mu gyedzi ahorow ntsi wɔtaa hɔn no nsɛm ho dwuma, na odzi nsɛm afofor so a ɔfa Jehovah Adasefo ho a ɔgye ntsɛmpɛ no ho dwuma.
Edwumayɛfo Eyiedzi Egyinatukuw: Ɔhwɛ nhyehyɛɛ ahorow a ɔfa Bethel ebusuamufo ho no do.
Nwoma Tsintsim Nye Adansi Egyinatukuw: Ɔhwɛ ma wɔyɛ Bible ho nwoma ahorow na wɔdze mona, afei ɔhwɛ ma wosisi mbea ahorow a yɛsom, kasa asekyerɛ edwumayɛbea nye edwumayɛbea nkorbata ahorow.
Ɔsom Edwuma Egyinatukuw: Ɔhwɛ hɛn edwuma a ɔnye dɛ, yɛkã “ahenman ho asɛmpa” no do.​—Matthew 24:14.
Nkyerɛkyerɛ Egyinatukuw: Ɔhwɛ ma wosiesie Bible mu nkyerɛkyerɛ ahorow, a wɔnam nhyiamu, skuul, video nye dza wɔbɔ tsie ahorow do dze ma hɛn no.
Nsɛnkyerɛw Egyinatukuw: Ɔhwɛ ma wosiesie Bible mu nkyerɛkyerɛ ahorow a wotsintsim nye dza ɔba wɛbsaet do no, na ɔsan so hwɛ kasa asekyerɛ edwuma do.
Sɛ yɛdze ndwuma a Akwankyerɛ Kuw no nam egyinatukuw ahorow yi do yɛ no to nkyɛn a, Akwankyerɛ Kuw no san hyia dapɛn biara susũ ahyehyɛdze no ehiadze ahorow ho. Wɔ dɛm nhyiamu ahorow yi ase no, Akwankyerɛ Kuw no mufo no susũ dza Kyerɛwnsɛm no kã ho, wɔma kwan ma Nyankopɔn no sunsum krɔnkrɔn no kyerɛ hɔn kwan, na wɔbɔ mbɔdzen dɛ wɔbɛyɛ anokor.​—Ndwuma 15:25.
Woananom na wɔyɛ Akwankyerɛ Kuw no aboafo?
Iyinom yɛ Christianfo anokwafo a wɔboa Akwankyerɛ Kuw egyinatukuw ahorow no. (1 Corinthfo 4:2) Wɔwɔ nyimdzee nye suahũ pii wɔ edwuma a ɔhyɛ egyinatukuw a wɔyɛ edwuma boa hɔn no ase no mu, na wɔkɔ dɛm egyinatukuw no dapɛn dapɛn nhyiamu no bi. Ɔwɔ mu dɛ aboafo yi nnsisi gyinae ahorow no bi dze, naaso wɔma adwenkyerɛ nye nhwehwɛmu nsɛm ahorow, wɔdze egyinatukuw no gyinaesi ahorow yɛ edwuma, na wɔhwɛ mbrɛ gyinaesi ahorow no nya nkɔenyim. Akwankyerɛ Kuw no so tum soma hɔn ma wɔkɛserasera hɛn enuayɛ kuw no a wɔwowɔ wiadze n’afã ahorow no. Wotum so soma hɔn ma wɔkɛma ɔkasa wɔ nhyiamu ahorow bi tse dɛ afrenhyia nhyiamu nye nhyiamu a wɔyɛ ma hɔn a woewie Gilead no ase.
ABOAFO NO HƆN EDZIN
Nwoma Tsintsim Nye Adansi
Bible no ma yehu siantsir nye mbrɛ wɔahyehyɛ nokwar Christianfo dɛ asafo.
Ɔkwan Bɛn do na Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no Dzi Dwuma Ndɛ?
Wɔ asomafo no hɔn aber do no, nyimpakuw ketseaba bi soom dɛ akwankyerɛ kuw maa Christianfo asafo no. Iyinom nye asomafo no nye mpanyimfo no. Ndɛ so ɛ?
Aso Jehovah Adasefo Wɔ Asɔfo A Wotua Hɔn Kaw?
Aso wɔakyekyɛ hɛn mu dɛ asɔfo nye asɔrmba? Woananom na wɔsom dɛ asomfo a wɔagye hɔn ato mu?
Fa mona Fa mona Ebɛnadze Nye Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw No?